‘बकुमफुसे सोच’ भनेपछि करिश्माले लेखिन्, ‘फेसबुके म होइन’ « Ramailo छ
‘बकुमफुसे सोच’ भनेपछि करिश्माले लेखिन्, ‘फेसबुके म होइन’
हिन्दी टेलिसिरियल लोक पातल मा नेपाली नारीलाई प्रयोग गरिएको तुच्छ गालिप्रति अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले पनि आपत्ती जनाएकी थिइन् । यसमा केही फेसबुक प्रयोगकर्ताले नेपाली महिलाको भारतमा वास्तविक बाध्यता देखाएको भन्दै फेसबुके राष्ट्रवाद नदेखाउन जस्ता प्रतिक्रिया आएका छन् ।
यस प्रकारका प्रतिक्रियालाई अभिनेत्री मानन्धरले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर जवाफ दिएकी छिन् । सोमबार बिहानै करिश्माले आफ्नो फेसबुकले लेखेको स्टाटसको केही अंश यस्तो छ, ‘कमजोर पक्षले सधैं प्रतिरक्षात्मक व्यवहार अपनाउने गर्छ । त्यो भनाई साचो हो जस्तो लाग्छ । हरेक पटक जब पनि हाम्रो देशको बारे कुनै नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ हामी सबै नेपाली सामाजिक सञ्जालमै भएपनि आ आफ्नो भनाइ राखेर बिरोध प्रदर्शन गर्छौ । यस्मा केही सकारात्मकता भन्ने शब्दलाई सपुर्ण समस्याको समाधान भनेर सोच्ने महानुभावहरुले यो क्रियाकलापलाई बकुमफुसे सोच पनि भनेको पाइन्छ ।
जस्तो कि, हामीलाइ नेपाली…र… भन्दैमा के भयो त सकारात्मक सोचौं । सिरियलको दृश्य को माग होला । अनी हाम्रो इतिहास हेर्नुस् हाम्रा चेलिहरुले के गरिरहेका थिए रे ! अझ एक जानाले त जो दिदीबहीनीहरु जो त्यो नरकबाट बचेर फर्किएर त्यही विषय सम्बन्धी सेवाकार्य गरिरहनु भएको छ । उहाँको टेलिभिजनको इन्टरभ्यु समेत हालेर यो हो हाम्रो रियलिटी भनेर राख्नु भएको छ । कसरी आफ्ना चेलीलाई यस्तो लान्छना लगाउन सक्नुहुन्छ ?
अनी जस्ले यो बारे दुई शब्द सामाजिक सञ्जालमा राख्छ फेसबुके राष्ट्रबाद रे ! नभुल्नुस, आज कोभिड १९ ले विश्वलाई गाँजेको बेला फेसबुक या समाजिक सञ्जाल नै यस्तो माध्यम हो जस्ले एक अर्कोलाई जोडेर राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न भिडियो कन्फ्रेन्सद्वारा महत्वपुर्ण विचारहरुको आदान प्रदान भई ठुला काम सम्पन हुने बाटो खुलेको छ । यो हो सकारात्मक पक्ष ।
मेरो प्रश्न उहाँहरुलाई के हो भने हजुरहरु यो टिप्पणी के मा लेख्दै हुनुहुन्छ ?’
(फेसबुके म होइन ?)